COVID-19 Kongah Iralrin ding, Theih awk le Zulh awk| COVID-19 သတိထားသိရှိရန်နှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ – THE CHINLAND POST
COVID-19 Kongah Iralrin ding, Theih awk le Zulh awk| COVID-19 သတိထားသိရှိရန်နှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
COVID-19 Kongah Iralrin ding, Theih awk le Zulh awk
COVID-19 သတိထားသိရှိရန်နှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
1. Hakha-Kalay, Hakha-Mandalay, Hakha-Yangon duhnak paoh ah khual tlawn khawhasi ko. Lamphihaum lo. Khualatlawngmi paoh Gate cheknak paoh ah zawtnak chekaum lai.
Khualtlawn lo atha bik.
၁။ ချင်းပြည်နယ်မှ ပြည်တွင်း ကလေး၊ မန္တလေး၊ ရန်ကုန်ပုံမှန်လမ်းကားပြေး ဆွဲနေပါတယ်။ လမ်းပိတ်တာမရှိပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ ရောဂါပျံ့ပွားမှုမရှိစေရန် စစ်ဆေးမှုကိုတော့ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီအချိန်မှာ ခရီးမထွက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
2.Eidin Thilri kongah Thlalau in um tuk dingasilo. Thilphor motor (Kungka) pawlakal dih ko lai. Thilman kai ter lo ding rian kan ngei cio. A herh sual lai tiah Cozah lei nih Facang tun 1000 Pakokku ah an cawk chom lai.
၂။ စားကုန်ပျက်လပ်မှုမရှိစေရေးကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှ အကောင်းဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကုန်တင်ကားများ ပုံမှန်သွားနေမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိတ်လန့်တကြားမဖြစ်ရန်နှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းများ တည်ငြိမ်အောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ရန်လုပ်အပ်လှပါသည်။ မတရားကုန်ဈေးနှုန်းများ မတင်ရန် သတိထားရမည်။
3.Mibu tonnak tuah le kal hrial hrimhrim ding; Mithi inn, Biakinn, thitumpuai, Meeting, Lakphakti/Zudawr, KTV, Rawl dawr, Training, tbk tuah lo ding.
၃။ လူစုလူဝေးဖြစ်သောနေရာများ_အခမ်းအနားများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်၊ အသုဘအိမ်၊ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်၊ အရက်ဆိုင်၊ KTV ဆိုင်၊ သင်တန်း၊ အစည်းအဝေး စသော နေရာများ မသွားရန်နှင့် အဖြစ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကျဉ်ရန်
4. Mi kuttlaih lo ding le zei tuah paoh ah Chappiat in thiang ten kuttawl lengmang ding.
၄။ လက်ဆွဲနှတ်ဆက်ခြင်း မလုပ်ရန်နှင့် လက်ကို အမြဲတိုင်း ဆပ်ပြာနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားရှိရန်
5.Hmurhup (mask) hman peng ding le naih tuk in mi chonh lo ding.
၅။ နှုတ်ဖုံးပါဝါ (Mask) ကို အသုံးပြုရန်နှင့် နီးနီးကပ်ကပ်စကားမပြောရန်။
6.A herhlo ah leng chuah lo ding. Khualtlawn isum ding
၆။ မလိုအပ်ရန် အပြင်မထွက်ရန်နှင့် ခရီးမထွက်ရန်။
7. Thawngdik lo share lo ding. A share tu an um zongah Cozah License pekmi, theihpimi Media pawl nih an tial le tiallo chekfel lengmang ding. Thawng dik loashare mi paoh upadi ningin dantatasi lai.
၇။ အများပြည်သူ စိုးရမ်ထိတ်လန့်စေမည့် မမှန်သတင်း၊ ကောလဟာလသတင်းများ ဖန်တီးဖြန့်ဝေခြင်းမလုပ်ရန်နှင့် မမှန်သတင်းများကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ထပ်ဆင့် မဖြန့်ဝေရန်။ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမည်။
8. Ramdangarak tlungmi,arak phanmi an um ahcunatlunnak inn ah leng chuahter lo in Ni (14) zawtnak zohfelasi lai. Cucaah ramdangarak tlungmi an um ahcun mah le sang uknak zungah thawngthanh colh dingasi lai. Lunghrinhmi na ngeih sualasi zongah uknak zungah thawngthanhasi lai.
၉။ ပြင်ပနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာသူများ သိရှိပါက နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများသို့ အမြန်သတင်းပို့ရန် နှင့် မိမိနေအိမ်တွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ရောဂါရှိမရှိနေထိုင်စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြသနာတစ်ခုခုရှိပါက ကျန်းမာရေးဌာနသို့ အမြန်သတင်းပို့ရန်
(COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုမဖြစ်ပေါ် စေရေးအတွက် လူထုသိသင့်သိထိုက်သည်များသိရှိ သတင်းဖြန့်ချိနိုင်ရန် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ချင်းမီဒီယာများတွေ့ဆုံပွဲ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၄)၏ အချက်အလက်များ စုစည်းတင်ပြသည်။ )
COVID-19 သတိထားသိရွိရန္နွင့္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား
၁။ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ျပည္တြင္း ကေလး၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ပုံမွန္လမ္းကားေျပး ဆြဲေနပါတယ္။ လမ္းပိတ္တာမရွိပါဘူး။ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေရာဂါပ်႕ံပြားမႈမရွိေစရန္ စစ္ေဆးမႈကုိေတာ့ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ခရီးမထြက္တာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
၂။ စားကုန္ပ်က္လပ္မႈမရွိေစေရးကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ အေကာင္းဆုံးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကုန္တင္ကားမ်ား ပုံမွန္သြားေနမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိတ္လန္႔႔တၾကားမျဖစ္ရန္နွင့္ ကုန္ေစ်းနႈန္းမ်ား တည္ျငိမ္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္အပ္လွပါသည္။ မတရားကုန္ေစ်းနႈန္းမ်ား မတင္ရန္ သတိထားရမည္။
၃။ လူစုလူေ၀းျဖစ္ေသာေနရာမ်ား_အခမ္းအနားမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ အသုဘအိမ္၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ၊ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ ထမင္းဆုိင္၊ အရက္ဆုိင္၊ KTV ဆုိင္၊ သင္တန္း၊ အစည္းအေ၀း စေသာ ေနရာမ်ား မသြားရန္နွင့္ အျဖစ္နုိင္ဆုံး ေရွာင္က်ဥ္ရန္
၄။ လက္ဆြဲနွတ္ဆက္ျခင္း မလုပ္ရန္နွင့္ လက္ကုိ အျမဲတုိင္း ဆပ္ျပာနဲ႔ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားရွိရန္
၅။ နႈတ္ဖုံးပါ၀ါ (Mask) ကုိ အသုံးျပဳရန္နွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္စကားမေျပာရန္။
၆။ မလုိအပ္ရန္ အျပင္မထြက္ရန္နွင့္ ခရီးမထြက္ရန္။
၇။ အမ်ားျပည္သူ စုိးရမ္ထိတ္လန္႔ေစမည့္ မမွန္သတင္း၊ ေကာလဟာလသတင္းမ်ား ဖန္တီးျဖန္႔ေ၀ျခင္းမလုပ္ရန္နွင့္ မမွန္သတင္းမ်ားကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ ထပ္ဆင့္ မျဖန္႔ေ၀ရန္။ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အေရးယူမည္။
၉။ ျပင္ပနုိင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား သိရွိပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ားသုိ႔ အျမန္သတင္းပုိ႔ရန္ နွင့္ မိမိေနအိမ္တြင္ (၁၄)ရက္အတြင္း ေရာဂါရွိမရွိေနထုိင္ေစာင့္ၾကည့္ရန္နွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပသနာတစ္ခုခုရွိပါက က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ အျမန္သတင္းပုိ႔ရန္
(COVID-19 ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕နွံ႔မႈမျဖစ္ေပၚ ေစေရးအတြက္ လူထုသိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားသိရွိ သတင္းျဖန္႔ခ်ိနုိင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔နွင့္ ခ်င္းမီဒီယာမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ ၂၀၂၀ခုနွစ္၊ မတ္လ (၂၄)၏ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတင္ျပသည္။ )
Previous Covid-19 Zawtnak Thlalau Lak Ah, Thawngpang Deu Tete
Next Covid-19 in Prince Charlesazaw, Dr. Mahathirapiang: Vawleipi ah 112,982 tluk an dam than